LP – PT DNISS – Auston College Myanmar
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာ ကို Auston College မှာ
အချိန်ပိုင်းတက်ရင်း ရယူလိုက်ပါ။ အချိန် ၈ လအတွင်းမှာပဲ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာရပ်များ နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ရာထူး လစာကို ရရှိအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ သင်တန်းကြေး က လစဉ် ၅သိန်းကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မိဘကုမၸဏီစကၤာပူကေနက်ေနာ္တို႔အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္နည္းပညာဆုံးမဩဝါဒ ေပး. အတြက္အေတြ႕အႀကဳံအႏွစ္ 20 ေက်ာ္ရွိသည္ေၾကာင့္, သင်သည်အၾကႇန်ဳပ်တို႔ကိုပင်ကဒီမွာျမင္ရမတိုင္မီအနာဂတ္နည္းပညာအေၾကာင္းကိုေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
Diploma in Networks, Information Systems & Security
နက်နဲတဲ့ သင်ရိုးတွေနဲ့ ဘာသာရပ် ၄ ခုကို ၈လတက်ရောက်ဆည်းပူး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နှင့် ညီမျှတဲ့ Programme ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Diploma မှာဆိုရင် Networking အပိုင်းတွေ ၊ Virtualization အပိုင်းတွေ ၊ Collaboration နှင့် network လုံခြုံရေး အပိုင်းတွေကိုပါ ခြေခံကျကျ သင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Networking အတွက်ဆိုရင် Mikrotik သင်ရိုးကို အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mikrotik Brand ကို နေရာတိုင်းမှာ အသုံးပြုလျက်ရှိနေတာ ကြောင့် သင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလှမ်းအတွက် အထောက် အကူဖြစ်စေမှာပါ။
VMWARE ကို အသုံးပြုတဲ့ Virtualization မှာဆိုရင် cloud Technology အခြေခံတွေ virtual server အသုံးပြု တည်ဆောက်နည်းတွေကို သင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ IT အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလှမ်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကိုလေ့လာ စီစစ်ပြီးမှ ဒီ Diploma ကို ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်လို့ သင့်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်နဲ့ ထပ်တူကျ မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားဟောင်းတွေဟာဆိုရင် စင်ကာပူနှင့် သိရိလင်္ကာနိုင်ငံ Datacenter တွေ telecom companies တွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြပါတယ်။
1. Computer Network Implementation
2. Computer Network Monitoring
3. Network Systems and Applications
4. Common Enterprise Functions
5. Network Optimization Techniques
6. Networked System Virtualization
7. Cyber Security Management 1
8. Cyber Security Management 2
Call Us 0995 224 0000